၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဘယ်လောက် အရွေ့ရှိနိုင်မလဲ ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဘယ်လောက် အရွေ့ရှိနိုင်မလဲ ?
❖ တပ်မတော်နဲ့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအကြား အပြန်အလှန် ထုတ်ပြန်ထားကြတဲ့ တစ်ဖက်သက်အပြစ်ရပ် ကြေညာချက်တွေက ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုအန္တရာယ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဆရာဦးမောင်မောင်စိုးနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။
❖ ဒါ့အပြင် အာဏာရ NLD ပါတီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းကနေ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဘယ်လောက်အထိ အရွေ့ရှိလာနိုင်မလဲ ဆိုတာတွေကိုပါ ဆွေးနွေးတင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Previous articleNLD ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း “သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး” အလုပ်ဖြစ်နိုင် မလား ?
Next article၂၀၂၀ အကြို တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှရေး မျှော်မှန်းချက်